Dalal Carab ah oo la ogaadey inay Muslimiinta Shiinaha kasoo cararta ay dalkaa khasab dib ugu celiyaan (Yaa ka mid ah?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dalal Carab ah oo la ogaadey inay Muslimiinta Shiinaha kasoo cararta ay...
Dalal Carab ah oo la ogaadey inay Muslimiinta Shiinaha kasoo cararta ay dalkaa khasab dib ugu celiyaan (Yaa ka mid ah?)
(Riyaad) 03 Okt 2020 – Qaar badan oo ka tirsan dadka Uighur-ga ah ee Muslimka ah oo Shiinaha kasoo cararay si ay u magan galaan Bariga Dhexe ayaa halkaa dib loogu celiyaa si khasab ah, sida ay ogaatey BBC.
Barnaamijka BBC Newsnight ayaa sheegay inay ogaadeen kiisas badan oo arday iyo dad nafta lasoo cararay oo Uighur ah ay dib Shiinaha oo lagu caddibayo u musaafuriyeen dalal Muslim ah – oo ay ku jiraan Sucuudiga, Imaaraadka iyo Masar – oo la shaqeeya Beijing.
Mid ka mid ah dumarka Uighur-ka ayaa BBC u sheegtay in ninkeeda aysan arkin muddo 5 sanadood ah kaddib markii la qabtay oo deeto loo gacan geliyey Shiinaha isagoo Sucuudiga ku xajinaya.
“Carruurteennii waxaa laga dhigay aabbe la’aan, hadda kaligeen ayaa nool,” ayay ku catowday hooyada oo hadda ku nool Turkey.
Tan iyo 2014-kii, waxay Dowladda Shiinuhu cadibaad ku wadeen Muslimiintan oo ku dhaqan woqooyi galbeed Shiinaha, kaasoo xad la leh Kyrgyzstan, Kazakhstan iyo Mongolia, isla markaana gacanta Shiinaha ku jirey tan iyo 1949-kii.
Shiinaha ayaa boqortooyooyinka Khaliijka u ah jaalka ganacsi ee ugu wayn, isagoo Sucuudiga kaliya 2018-kii u dhoofiyey badeeco ku kacaysa $46bilyan oo doollar, isagoo saliidda ugu badan ka dhoofsada dalkaasi.
Nidaamyada dalalkan ayaan nasiib xumo kaashkaas ay haystaan aan u adeegsan inay cadaadis ku saaraan dalal badan inay dhibaatada ka daayaan Muslimiinta, balse iyaga ayaaba lacag ku bixiya in Muslimka la dhibo.
Previous articleTOOS u daawo: Leeds United vs Man City – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleIsrael oo qoorta isu gelisey Imaaraadka & Masar (Khalad istaraatiji ah oo ay Masar gashay oo looga faa’iidaystey)